အပြိုကွီးဘ၀နဲ့ ကိုယျ့ဘ၀ကိုယျကိုယျ သာသာယာယာဖွတျသနျးနရေတာကိုပဲ ပြျောရှငျပါတယျ – Shinyoon
အပြိုကွီးတဲ့ ၃၀နားကပျလာတဲ့ မိနျးကလေးတှကေို လှောငျတဲ့ပွောငျတဲ့ နရောမှာ သုံးတတျကွတယျ
တကယျဆို အပြိုကွီးဖွဈဖို့ လှယျတယျမြား မှတျနလေားမသိဘူး လငျယူသားမှေးပွီး အပူမီးတှကေို မလိုခငျြလို့ တဈဦးတညျးတဈယောကျတညျး ရပျတညျဖို့ဆိုတာ ဘယျလောကျခကျခဲမယျလို့ထငျလဲ တခွားသူတှလေို နားလညျပေးတတျတဲ့ ပုခုံးလေးတဈစုံလောကျ ပေးသနားပါလို့ အသနားခံပွီး တောငျးနစေရာမလိုဘူး ကိုယျ့ကိုယျနားလညျတတျအောငျ ​ဖေးမတတျအောငျ ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ ကွိုးစားယူခဲ့ရတာ
နှေးထှေးတဲ့ ရငျခှငျတဈစုံလေး ရှိစခေငျြလိုကျတာဆိုတဲ့ ဆန်ဒတှကေ ပူမှနျးသိလို့ အပူတှေ မရှာတာပါ တခြို့ကပွောကွသေးတာ . . . ခဈြမယျ့ ကွိုကျမယျ့သူ မရှိလို့ အပြိုကွီးဖွဈနတောတဲ့ မဟုတျဘူး လှယျလှယျလေးခဈြပွီး လှယျလှယျလေးမုနျးတတျတာကို မလိုခငျြလို့ တဈကိုယျတညျးနနေတော ယောကျြားယူတယျဆိုတာ ကံစမျးမဲနှိုကျရသလိုပဲ ကံကောငျးဖို့ထကျ ကံဆိုးဖို့က အဆပိုမြားတယျလေ ယူပွီးမှ မကောငျးဘူး ပွနျလဲပေးလုပျရအောငျ ကုနျရောငျးကုနျဝယျနတောလဲ မဟုတျ နောကျဆုံးကိုယျပဲ ဒုက်ခတှေ ခါးစညျးခံရမှာ
အပြိုကွီးတဲ့ လှောငျသလိုလို ပွောငျသလိုလိုချေါပမေယျ့ အပြိုကွီးဆိုတဲ့ ဂုဏျကို မကျပါတယျ ဘယျသူတှေ ဘယျလိုပဲ ပွောကွပါစေ အပူတှလေူက ကိုယျ့ရဲ့ အေးခမျြးနတေဲ့ဘ၀ကို မနာလိုမရှုစိမျ့ ဖွဈနတေယျလို့ပဲ မှတျပါတယျ ကိုယျစားခငျြတာစားဖို့ ကိုယျဝတျခငျြတာဝတျဖို့ ဘယျသူ့ဆီမှ ခှငျ့တောငျးဖို့မလိုအပျဘူး ခရီးတှထှေကျခငျြထှကျမယျ နောကျဆံတငျးဖို့ မလိုဘူး ကိုယျဝယျခငျြတာဝယျဖို့ ဘယျသူ့မကျြနှာမှ ကွညျ့နဖေို့မလိုအပျဘူး
အပြိုကွီးတဲ့ နာမညျသာဆိုးတာပါ တကယျတမျးဘ၀မှာကတြော့ ထငျထားတာထကျ ပိုပွီးသာယာပါတယျ အသကျတှကွေီးလာတဲ့အခါ ဘယျသူကပွနျကွညျ့မလဲတဲ့ အိုစာမငျးစာကို ခုကတညျးက ကွိုပွီးရှာထားပွီးသားပါ မလိုအပျပါဘူး ကိုယျ့ကို နှဈသိမျ့ပေးမယျ့ ပုခုံးတဈစုံလဲ မလိုအပျဘူး နှေးထှေးပါတယျဆိုတဲ့ ရငျခှငျလဲ မလိုအပျဘူး
မကျြရညျနဲ့ မကျြခှကျလဲ မဖွတျသနျးခငျြဘူး တဈကိုယျတညျး အပြိုကွီးဘ၀နဲ့ ကိုယျ့ဘ၀ကိုယျကိုယျ သာသာယာယာဖွတျသနျးနရေတာကိုပဲ ပြျောရှငျပါတယျ ။
အပျိုကြီးတဲ့ ၃၀နားကပ်လာတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို လှောင်တဲ့ပြောင်တဲ့ နေရာမှာ သုံးတတ်ကြတယ်
တကယ်ဆို အပျိုကြီးဖြစ်ဖို့ လွယ်တယ်များ မှတ်နေလားမသိဘူး လင်ယူသားမွေးပြီး အပူမီးတွေကို မလိုချင်လို့ တစ်ဦးတည်းတစ်ယောက်တည်း ရပ်တည်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လောက်ခက်ခဲမယ်လို့ထင်လဲ တခြားသူတွေလို နားလည်ပေးတတ်တဲ့ ပုခုံးလေးတစ်စုံလောက် ပေးသနားပါလို့ အသနားခံပြီး တောင်းနေစရာမလိုဘူး ကိုယ့်ကိုယ်နားလည်တတ်အောင် ​ဖေးမတတ်အောင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ကြိုးစားယူခဲ့ရတာ
နွေးထွေးတဲ့ ရင်ခွင်တစ်စုံလေး ရှိစေချင်လိုက်တာဆိုတဲ့ ဆန္ဒတွေက ပူမှန်းသိလို့ အပူတွေ မရှာတာပါ တချို့ကပြောကြသေးတာ . . . ချစ်မယ့် ကြိုက်မယ့်သူ မရှိလို့ အပျိုကြီးဖြစ်နေတာတဲ့ မဟုတ်ဘူး လွယ်လွယ်လေးချစ်ပြီး လွယ်လွယ်လေးမုန်းတတ်တာကို မလိုချင်လို့ တစ်ကိုယ်တည်းနေနေတာ ယောက်ျားယူတယ်ဆိုတာ ကံစမ်းမဲနှိုက်ရသလိုပဲ ကံကောင်းဖို့ထက် ကံဆိုးဖို့က အဆပိုများတယ်လေ ယူပြီးမှ မကောင်းဘူး ပြန်လဲပေးလုပ်ရအောင် ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်နေတာလဲ မဟုတ် နောက်ဆုံးကိုယ်ပဲ ဒုက္ခတွေ ခါးစည်းခံရမှာ
အပျိုကြီးတဲ့ လှောင်သလိုလို ပြောင်သလိုလိုခေါ်ပေမယ့် အပျိုကြီးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကို မက်ပါတယ် ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ပြောကြပါစေ အပူတွေလူက ကိုယ့်ရဲ့ အေးချမ်းနေတဲ့ဘ၀ကို မနာလိုမရှုစိမ့် ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲ မှတ်ပါတယ် ကိုယ်စားချင်တာစားဖို့ ကိုယ်ဝတ်ချင်တာဝတ်ဖို့ ဘယ်သူ့ဆီမှ ခွင့်တောင်းဖို့မလိုအပ်ဘူး ခရီးတွေထွက်ချင်ထွက်မယ် နောက်ဆံတင်းဖို့ မလိုဘူး ကိုယ်ဝယ်ချင်တာဝယ်ဖို့ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ ကြည့်နေဖို့မလိုအပ်ဘူး
အပျိုကြီးတဲ့ နာမည်သာဆိုးတာပါ တကယ်တမ်းဘ၀မှာကျတော့ ထင်ထားတာထက် ပိုပြီးသာယာပါတယ် အသက်တွေကြီးလာတဲ့အခါ ဘယ်သူကပြန်ကြည့်မလဲတဲ့ အိုစာမင်းစာကို ခုကတည်းက ကြိုပြီးရှာထားပြီးသားပါ မလိုအပ်ပါဘူး ကိုယ့်ကို နှစ်သိမ့်ပေးမယ့် ပုခုံးတစ်စုံလဲ မလိုအပ်ဘူး နွေးထွေးပါတယ်ဆိုတဲ့ ရင်ခွင်လဲ မလိုအပ်ဘူး
မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက်လဲ မဖြတ်သန်းချင်ဘူး တစ်ကိုယ်တည်း အပျိုကြီးဘ၀နဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်ကိုယ် သာသာယာယာဖြတ်သန်းနေရတာကိုပဲ ပျော်ရွှင်ပါတယ် ။